KD oo doonaya inuu dhimo kharashka soogalootiga ku baxa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaha xisbiga Kristendemokraterna (KD) Göran Hägglund
KD oo doonaya inuu dhimo kharashka soogalootiga ku baxa
In la hagaajiyo nidaamka qaabilaadda qaxootiga
La cusbooneeyay torsdag 18 december 2014 kl 13.42
La daabacay torsdag 18 december 2014 kl 09.25
Xisbiga Kristdemokraterna (KD) ayaa soo jeediyay fikir ah in guud ahaan qaxootiga dalka yimaada ee magan-gelyo-doonka ah la siiyo sharci ku meel-gaar ah, halka iminka laga amba-qaado in la siiyo mid joogto ah. Waa qayb ka mid ah fikirro dhowr ah oo uu xisbiga KD soo bandhigay oo lagu dhimeyo miisaaniyadda ku baxda qaabilaadda soo-galootiga, sida uu maqaal ku daabacay hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Göran Hägglund uu ku daabacay war-geeyska Dagens Nyheters boggiisa doodda.
Guud ahaan in is-bedel lagu sameeyo nidaamka maanta u deg-san wakaaladda socdaalku oo salka ku haya in dadyoowga deggenaanshaha ku hela dalka la siiyo sharci deggenaansho ee guud, islamarkaana laga dhigo mid ku meel-gaar ah - saddex sannadood. Hase yeeshee la siin karo deggenaansho joogto ah kolka ay saddexdaasi sannadood dhammaato haddii aanay wax iska bedelin xaaladdii. Sidoo kale in ruuxa dalka la qabsaday muddada saddexda sannadood ah uu deggenaansho joogto ah ku heli karo haddii uu shaqeesto, waana mid saameyn ku yeelaneeysa tirada soo-galootiga dalka timaada.
In la dhimo gunnada la siiyo qaxootiga dalka ku cusub waxa loo yaqaanno etableringsersättningen halka ay maanta ka tahay qiyaastii 300 oo koronka iswiidhishka laga dhimo 25 koron.
Iyo ugu dambeeyn middaa saddexaad in shanta sannadood ee ugu horreeysa laga dhimo shakhsiga soo-galootiga ah cashuurta laga gooyo dhaqaale gaarsii-san illaa 100 000 oo koron, waana mid lagu soo jiidaneyo sidii lagu dedejin lahaa la qabsashada suuqa shaqada ee dadyoowga dalka ku cusub:
- Waa saddex fikir oo la xiriira tallaabooyin cadcad oo wax looga qaban karo. Sidii looga soo bixi lahaa godka difaaca ee loo bilaabi lahaa wada-hadal ku saabsan - sidee loo baahan yahay in loogu howl-galo si loo hagaajiyo. Sidee loogu sahli karaa soo-galootigu iney sida ugu dhakhsiyaha badan kaga mid noqon karaan suuqa shaqada.
- Fikraddayadu maahan inaan hor-joogsiyo dhiganno xuduuddeenna, fikradayadu waxay tahay sidii aan ku abuuri lahayn hab u qalma qaabilaadda soo-galootiga magan-gelyada u baahan, sida uu sheegay Göran Hägglund.
Fikirrada tallaabooyin ee uu saaka soo ban-dhigay hoggaamiyaha xisbiga KD, Göran Hägglund ayuu ku sheegay iney ugu wacan yihiin sidii soo-galootiga dalka ku cusub loo dardar-gelin lahaa iney si sahlan dalka ula qabsadaan, iyadoona loo marayo suuqa shaqada:
- Waa inaan tijaabinno dhabbooyin hor leh sidii loogu sahli lahaa suuqa shaqada. Haddii ey soo-galootigu helaan suurtagalka ah iney shaqeeystaan, waa mid u wanaag-san cid walba guud ahaan iyo sidoo kale kuwayagii horey dalkan muddaba ugu noolaa, haddii laga baxo shaqa-la'aanta oo la howl-galo.
Hase yeeshee siyaabo kala duwan loo macneeyey fikirrada ka soo yeeray hoggaamiyaha KD. Caalinka Jonas Hinnfors, ayaa sheegay inay dhici karto inay tallaabadani ka dambeeyso sidii taageero looga soo jiidan lahaa xisbiga Sverigedemokraterna:
- Midda uu ka rajaynayo Hägglund ayaa ah in xisbigiisu u muuqdo mid leh siyaasad dheeli-tiran - sidaa-daraadeedna uu rajeeynayo in halkii looga codeeyn lahaa siyaasadda xag-jir-san ee xisbiga Sverigedemokraterna, looga codeeyo xisbiga KD. Tallaabadaa ayaa noqon karta mid lagu guuleeysto, isla-markaana noqon karta mid halis ah oo lagu guul-darreeysto. Waxaa marar badan dhacda in kolka ey xisbiyada xidideeystay ku soo dhowaadaan fikirba ey suurtageliyaan in fikirkaasi noqdo mid la caadeeysto. Waxay middaasi marka u daneeyn karta ciddii aad dooneysay inaad codad ka soo jiidato, sida uu sheegay Jonas Hinnfors.
Hoggaamiyaha xisbiga Shacabka - Folkpartiet (FP) ayaa horay u sheegay inay dhici karto in xisbigiisu soo dhoweeyo, isla-markaana uu tyaageero ka helo fikirrada uu soo ban-dhigay hoggaamiyaha xisbiga KD, hase yeeshee aanay u muuqan caalinka Jonas Hinnfors in fikirrada Hägglund ey taageero ballaaran ka heli doonaan xisbiyada garabka midig. Iyadoona ey labada hoggaamiy ee Anna Kinberg Batra - Modaraterna iyo Annie KLööf - xibiga Dhexe - centarku si cad u bayaaniyeen iney ka soo hor-jeedaan siyaasad ku adkeeneysa soo-galootigu iney dalkan yimaadaan.
Hase yeeshee uu taageero ka heli karo fikirka la xiriira hagaajinta dhanka is-dhex-galka:
- Fikirrada Häglund waa kuwo laba afle ah. Mid waxay ku saab-san tahay sida laga yeeli doono dadyoowga dalka yimaada, waa mid dhan ka saameeyneysa is-dhex-galka - halkaasina oo doodo ballaaran laga yeelan karo xisbiyada dhexdooda. Hase yeeshee midda la xiriirta shuruucda deggenaansho ee ku meel-gaarka ah, waa fikir ey kala soo gudboonaan karaan culeeyso fara badan, iyada oo faraha lala geleyo doodda la xiriirta tirada qaxootiga ee dalka loo ogol yahey iney soo caga-dhigtaan iyo inta albaabbada la fureyo ama la xireyo, waa midda ay adag tahay in xisbiyada kale ey uga soo dhowaadaan, sida uu sheegay Jonas Hinnfors.))
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa guud ahaan soo dhoweeyay baaqa hoggaamiyaha xisbiga KD Göran Hägglund, sheegayna in fikirradaasi ay ahaayeen qaar uu xisbiga SD u taagnaa. Hase yeeshee uu xisbigu iska dheereeyey fikirka ah cashuurta kala duwan ee loo kala sameeyneyo soo-galootiga iyo bulshada iswiidhishka, sida uu sheegay ku-simaha hoggaamiyaha xisbiga SD, Mattias Karlsson.
Christina Höj Larsen, af-hayeenka arrimmaha socdaalka ee xisbiga Bidixda - Vänsterpartiet (V), ayaa dhaleeceeysay fikirrada uu soo ban-dhigey hoggaamiyaha xisbiga KD ee lagu dhimeyo miisaaniyadda ku baxda soo-galootiga, iyadoona sheegtay in xisbigu ku sugan yahay xaalad degdeg ah oo uu codad ku baarbaarayo:
- Waa fikir aad u liita oo dani i baday ah. Waa mid la hubo in xisbiga KD uu doortay sidii uu ku xawaajeeyn lahaa fikir markiisii horeba khaldanaa iyo in garabkiisa siyaasaddu horeyba uu diiday daawo lacag la'aan ah ee dhallaanka la siiyo, in kor loo qaado gunnada la siiyo dadyowga shaqa-la'aanta ku sugan iyo wixii la mid ah, sida ay sheegtay Christina Höj Larsen, af-hayeenka siyaasadda socdaalka ee xisbiga Vänsterpartiet.